Faquuqa ay dareemaan Muslimiinta Madow marka ay timaaddo haasaawaha Muslimiinta kale ay kala midabka yihiin | Dayniile.com
Home Warkii Faquuqa ay dareemaan Muslimiinta Madow marka ay timaaddo haasaawaha Muslimiinta kale ay...
Faquuqa ay dareemaan Muslimiinta Madow marka ay timaaddo haasaawaha Muslimiinta kale ay kala midabka yihiin
“Waxay dadku igu yiraahdaan waxaad tahay nin qiima badan, walaashay ayaad ku fiicanaan lahayd laakiin waxaad tahay madow, taas oo la yaab igu noqotay.”
Kha’llum Shabbaz, midabkiisu waxay u keentay dhibaatooyin la xiriira haasaawaha oo waxaa ku adkaatay in isagoo Muslim ah ay hadana midabkiisu lagu hayb sooco. Waxa uu ku nool yahay UK.
“Marka laga eego dhinaca diinta, waxaad tahay Muslim laakiin hadana madow. Balse marka laga hadlayo dhinaca dhaqankana waxaad tahay madow hadana Muslim ah markaa xaggee loo baxsanayaa?” Kha’llum Shabbaz oo 28-jir ah ayaa u sheegay sidaa BBC-da.
Oktoobar waa bisha taariikhda dadka madow, wuxuuna dareemayaa in Muslimiinta madow la ilaawi karo marka ay jiraan munaasabadaha iyo dabaaldegyada.
Kha’llum, oo deggan Birmingham, England, ayaa dareema xaaladaha noocaan oo kale ah marka uu la kulmo qof ka mid ah qoyska oo uu jecel yahay.
“Sidoo kale arrintan waxay iiga dhigan tahay qof hal meel taagaan oo qowmiyadiisa meel ka baxsan ka guursan karin, waxaana laga yaabaa in sababta aan weli uu guursan ay taasi tahay.”
Kaligiina ma ahan
Baaritaan lagu sameeyay in ka badan 400 oo qof oo isticmaala aaladda Muzmatch, oo ah mid ka mid ah App-yada shukaansiga Muslimiinta ee ugu weyn adduunka, ayaa lagu ogaaday in 74% xubnaha madowga ah ee ka tirsan ay dareemeen in jinsigu uu saameeyay xiriiradii ay sameeyeen.
Waxaa lagu soo bandhigay arrimo ay ka mid yihiin takoorid iyo midab-kala-sooc, iyadoo qaar ka mid ah xubnaha madowga ah ay dareemeen in aan lagu matalin goobta shukaansiga ee online-ka ah.
Kaya oo 31-jir ah, waxay arrimahaas la xiriirinaysaa sida iyadoo haweeney Muslimad hadana madow ah ay dareento marka ay ku jirto qolalka shukaansiga adduunka.
“Mar walba si ula kac ah looma sameeyo, laakiin waxaan ogaaday inay jiraan rag badan oo dhahaya waxyaabo ay ka mid yihiin ‘Waxaad u egtahay mid qalaad’ iyo inay jeclaan lahaayeen inay yeeshaan xaas madow iyo caruur madow.”
Waxay dareensan tahay inay jiraan dhaqamo ka soo horjeeda Muslimiinta madow.
“Waxaa jirtay mar uu qof ii sheegay in dookhiisa ay ahayd in uu shukaansado qof ay isku jinsi yihiin, wax intaas ka badanna igama uusan dhihin, qof walba waxa uu xaq u leeyahay dookhiisa, laakiin waa arrin qofka uur ku taallo ku reebeyso”
Waayo-aragnimada Kha’llum iyo Kaya waxay ka heleen App-ka muraayadda shukaansiga waxayna ka cabir qaateen sida guud ahaan ay wax u noqon karaan marka laga hadlayo bulsho weynta Muslimiinta madow.
Zaynab Xasan, oo ka mid ah dadka shaqeeya isqurxinta, ayaa sheegeysa “waa inaad muujisaa inaad Muslim tahay” markaad tahay qof madow, taas oo aan ku dhicin dadka kale.
“Deegaanka aad joogto waxa uu sameeyaa farqi weyn sababtoo ah marka aan joogo Nigeria, madowga iyo Muslimku waa waxa qof kastaa yahay,” ayay tiri Saynab oo 27-jir reer Manchester ah.
Saynab waxay sheegtay in bulshooyinka Muslimiinta qaarkood uu ka jiro faquuq dhanka midabka ah gaar ahaan dadka madow ee hadana Muslimiinta ah”.
Kaya waa Muslimad qaadatay diinta Muslimka ah wayna ka xuntahay in takoorka noocaas ahi uu jiro, iyada oo sheegtay in sida ay daacadda ugu tahay ama gudashada waajibaadka aysan ka yarayn kuwa ku dhashay diinta.
“Waxaa jira dhibaatooyin ka imaanaya dhaqanada kala duwan, waxaa jira rajooyin gaar ah oo shakhsiyaadka iyo qoysasku ka qabaan oo aanan ka imaanin dhaqanka diinta Islaamka.”
Tan iyo markii ay mudaaharaadyadii Black Lives Matter ay dhaceen ka dib dhimashadii George Floyd, Zaynab Xasan waxay dareensan tahay inuu jiro isbeddel yar.
“Waxaan u maleynayaa in dhaqdhaqaaqa oo uu sababay isbeddel.”
“Waa arrin deg-deg in la yiraahdo wax walba waa ay is beddeleen, balse laga soo bilaabo wada sheekeysiga aan arkayey, xitaa bogagga aan ku xiranahay, waxaan dareemayaa in hadda ay jiraan Muslimiin madow oo badan oo ku dhex jira bulshada.”
Si loo helo isbeddel wanaagsan, Kha’llum wuxuu dareemayaa inay jiraan meelo bannaan oo dhanka Muslimiinta madow ah.
“Qof kastaa wuxuu u baahan yahay inuu dareemo inaanan bulshada laga dhex saarin, wayna wanaagsan tahay inaad dareento inaadan keligaa ahayn ,” ayuu raaciyay.
Kaya waxay dareensantahay inay jiraan baahiyo loo qabo in la buuxiyo meelaha bannaan si Muslimiinta Madow ay u dareemaan inay la mid yihiin bulshada inteeda kale.
‘Dhammaanteen waan wada noolaan karnaa’
Saynab waxay dareensan tahay in ururada Muslimka ahi ay wax badan qaban karaan, hase ahaatee sidoo kale waa masuuliyad saaran dhammaan bulshada oo ay tahay inay ka wada shaqeeyaan.
“Dhammaanteen waan wada noolaan karnaa annagoon nagala xayuubin aqoonsigeena. Ma ahan in jinsiyadeena madow aan ka tagno,haddii aan Muslimiin nahay iyo haddii kaleba,” ayay raacisay.
Previous articleAlec Baldwin oo ka hadlay meel fagaare ah tan iyo markii uu si lama filaan ah u toogtay filim-qaade Halyna Hutchins
Next articleDr. Faisal Roble ayaa qoray qormadan hoose:
Cali Yare oo sheegay inaanu jirin wasiir awood u leh hakinta...
axmed shiikh - December 26, 2021 0
Guddoomiye kuxigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir, Cali Cabdi Wardheere, ayaa sheegay inaanan la dhaawacin hannaanka kala danbeynta dowladnimada Soomaaliya. Guddoomiye Cali, ayaa...
QM oo walaac ka muujisay xaaladda dadkii ka barakacay Boosaaso
Xiisad ka dhalatay dhinaca dhaqaalaha ah oo ka taagan Garoonka Diyaaradaha...